ESA waxay ku tababaran doontaa Lanzarote gumeysiga Mars | Saadaasha Shabakadda
ESA waxay ku tababaran doontaa Lanzarote gumeysiga Mars
Nidaamka qaabaynta qaab-dhismeedka mala-awaalka ah
Warar cusub, ka Wakaaladda Hawada Yurub (ESA) tartanka mustaqbalka loo gumeysto Mars. Dhinacyada hay'adaha iyo shirkadaha kala duwan, waxaa jira caqabad ah in la gaaro, muhiimadda ay leedahay in la noqdo kan ugu horreeya ee lagu gaaro gumeysi, waa wax ka weyn hanka, waa waxa lagu qori doono buugaagta taariikhda. Rabitaanka-u-hilowga rabitaanka dib-u-habeynta bey'adda Martian, wuxuu ku yaal meelaha ugu xun, cadaawadda ama meelaha la yaabka leh ee ku yaal meeraha oo dhan. Mid ka mid ah sababaha Lanzarote ayaa loo doortay, dhulkeeda gaarka ah oo la mid ah meeraha cas.
Hadafka ugu dambeeya ee dhammaan tijaabooyinka iyo dadaalkuba ay ku meeraystaan ​​waa "Terraforming of Mars". Un mashruuca injineernimada meeraha Ujeeddadeeduna tahay in meeraha oo dhan loo beddelo xaalado sida ugu badan ugu eg Dunida. Mid ka mid ah tillaabooyinka ugu horreeya ayaa ah in la dhiso degsiimo wanaagsan oo dadku markii hore ku noolaan karaan. Waxaan dhawaan wax ka qornay a magaalo kumeel gaar ah oo laga dhisayo Dubai. Hadda waa marki loogu talagalay Lanzarote.
Pangea waa magaca mashruuca macluumaadka ee ay cir bixiyeyaashu ku tababaran doonaan dhulka hoostiisa, mid ka mid ah fursadaha dhabta ah ee la tixgelinayo. Sababta ugu weyn ayaa ah in heerka dhib ee Mars bilowgii uu noqon doono mid aad u sarreeya. Mid ka mid ah meelaha ugu nabdoon uguna macquulsan degsiimooyinka aadanaha waa in lagu noolaado mid ka mid ah tuubooyinka ama godadka waaweyn ee ku yaal Mars. Meelo la mid ah kuwa laga heli karo Lanzarote.
Muddo 5 maalmood ah bisha Noofambar, ololahan ayaa la socon doona iyada 50 qof, 14 tijaabo, 18 hay'adood, iyo afar hay'adood oo hawada sare ka shaqeeya. Sidoo kale kaqeybgalayaasha ayaa noqon doona qaar ka mid ah martida ka socota howlgalka ExoMars ee ESA, oo isku diyaarinaya inay u diraan robot sahamiya Mars illaa 2020. Robot la socda kaamirad xallinta sare leh iyo xirmo dareemayaal lagu cabbiro uumiga biyaha ee deegaankan oo la filayo inuu gebi ahaanba mugdi noqdo.
Sida had iyo jeer, waxaan sii wadeynaa inaan soo tabino horumarka laxiriira qabsashadii Mars, wax aan shaki ku jirin, waxaan rajeyneynaa inaan ku noolaan karno oo aan markhaati ka noqon doonno. Shaki la’aan taariikh muhiim u ah taariikhda aadanaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » ESA waxay ku tababaran doontaa Lanzarote gumeysiga Mars
Kulaylka adduunka, xasaasiyadda ayaa cirka isku shareertay
6 ka mid ah 16 xagaa oo qalalan ayaa dhacay 10-kii sano ee la soo dhaafay